Vamwe Fekitori - China Vamwe Vagadziri uye Vatengesi
Chinhu chaungasabhadhara zvakanyanya muhupenyu ivo vari ivo vadiki vaunogona kushandisa kusimudzira hupenyu hwako, ndosaka zvinhu zvekusimudzira nezvipo zvichioneka, uye kana zvasvika pakutora chinhu kuti chive chako, wobva wauya kuna Pretty Kupenya Zvipo. Kuve nyanzvi yekugadzira, isu tiri fekitori iyo makumi emakore ruzivo rwakawanda pazvinhu zvakagadzirwa nesimbi zvigadzirwa. Hazvina mhosva kuti uri dhizaini kana kwete, Pretty Shiny Zvipo. ine nyanzvi timu timu yekuidhonza kunze, vashandi vedu vane hunyanzvi uye michina ichaisa zvigadzirwa kubva pabepa zvigoitika muchokwadi. Zvinhu zvine yako kambani kana zita rezita riri kuti uwane yakaderera-mutengo kushambadzira nzira kana sarudza zvirinani kugadzirisa kugadzira chimwe chinhu senge mari clip, mamaki ebhuku, zvishongo, ID tag kune yepamusoro imwe uye tumira sezvipo, makuru mabrandari seDisney, Coca cola , McDonald's, Walmart, Starbucks, sarudza isu, wadii iwe?
Mabhuku eMaki & Mapepa Mapepa
Bhegi Hanger & Key Tsvaga
Snowflake Multi Chishandiswa